MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာ အခမဲ့အတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ ၂၀၂၁ ကို download လုပ်ပါ
2021 နိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာပညာသင်ဆုများ နိုင်ငံခြားအခွင့်အလမ်းများကိုလေ့လာပါ ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေနှင့်ရန်ပုံငွေများ
ကနေဒါတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း ဝန်ခံချက် | ပညာသင်ဆုများ အခကြေးငွေများ ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ချေးငွေများ
သြဂုတ်လ 25, 2021 Okpara Francis
MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားမှု အခမဲ့အတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download
MTN Foundation ပညာသင်ဆုကိုအခမဲ့လျှောက်ထားလိုပါသလား (သို့) အတိတ်ကမေးခွန်းများနဲ့အဖြေများအားအတည်ပြုပြီးသော MTN Foundation ပညာသင်ဆုကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ ဤလမ်းညွှန်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်ရန်သင်အားလမ်းပြလိမ့်မည်
MTN ဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆုလျှောက်ထားမှုသည်ယခုလက်ရှိတွင်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်ကိုအောက်ပါလျှောက်လွှာများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။
1 MTN Scholarship ဆိုတာဘာလဲ။
2 MTN ပညာသင်ဆုသည်အမှန်လား။
3 MTN ပညာသင်ဆုကိုမည်သူလျှောက်ထားနိုင်ပါသနည်း။
4 MTN Foundation ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်များ
5 MTN ပညာသင်ဆုမည်မျှကျသင့်သနည်း။
6 MTN ပညာသင်ဆုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသနည်း။
6.1 MTN သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်
6.2 မျက်မမြင်ကျောင်းသားများအတွက် MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်
7 MTN ပညာသင်ဆုအတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုရယူပါ
7.1 MTN ပညာသင်ဆုအတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
7.2 MTN ဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆုအတိတ်မေးခွန်းများနမူနာ
MTN Scholarship ဆိုတာဘာလဲ။
MTN သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပညာသင်ဆုအစီအစဉ် (MTN STSS)
မျက်စိကန်းသောကျောင်းသားများအတွက် MTN ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် (MTN SSBS)
MTN STSS သည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကျောင်းသားများသာရရှိနိုင်ပါသည်။ MTN SSBS သည်ဘွဲ့ကြိုမျက်မမြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားသူတို့၏လေ့လာမှုနယ်ပယ်မခွဲခြားဘဲရရှိနိုင်ပါသည်။
MTN ပညာသင်ဆုသည်လိမ်လည်မှုမဟုတ်ပါ၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ MTN ဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအရာရှိများဟုဆိုကြသည်။ လိမ်လည်လှည့်စားသူအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
MTN ပညာသင်ဆုကိုသေချာစေရန်သင့်အားကူညီမည့်မည်သူ့ကိုမျှငွေမပေးပါနှင့် - MTN ပညာသင်ဆုသည်အရည်အချင်းပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခံရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူများအပြင်အခြားသူများကအာမခံချက်အပေါ် အခြေခံ၍ မည်သူမျှအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောသင်တန်း ၃၀၀ နှင့်အစိုးရတက္ကသိုလ်များ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးကောလိပ်များတွင်ပညာသင်ကြားနေသောမျက်မမြင်ကျောင်းသားများသည် MTN ဖောင်ဒေးရှင်းပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။
MTN သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပညာသင်ဆုအတွက်အနည်းဆုံး CGPA သည် ၅.၅ အဆင့်တွင် ၃.၅ (သို့) ညီမျှသည် (ဒုတိယတန်းအထက်) နှင့်မျက်စိကန်းသောကျောင်းသားများအတွက် MTN ပညာသင်ဆုအတွက်အနည်းဆုံး CGPA သည် 3.5 grading system တွင် 5.0 ဖြစ်သည်။
Polytechnics မှလျှောက်ထားသူများသည်လျှောက်လွှာတင်သောအချိန်တွင် Upper Credit GPA တစ်ခုရှိရမည်။
MTN Foundation ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်များ
လျှောက်ထားသူများသည်နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ရမည်
လျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင်အဆင့် ၃၀၀ ရှိရမည်
နိုင်ဂျီးရီးယားရှိအများပြည်သူတက္ကသိုလ်၊ ပိုလီတက္ကနစ်သို့မဟုတ်ပညာရေးကောလိပ်တွင်ပညာသင်ကြားရမည် (ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည်အရည်အချင်းမပြည့်မီ)
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင်တန်းကိုလေ့လာနေသင့်သည် (သို့) မျက်မမြင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရမည်
လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံး CGPA နှင့်ကိုက်ညီရမည်
နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် MTN ဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆုကိုနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်သိန်းနှစ်ရာတန်ဖိုးရှိသည်။
MTN ပညာသင်ဆုတတ်မြောက်မှုစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးသောအောင်မြင်သောလျှောက်ထားသူများသည်လိုအပ်သောအဆင့်များကိုထိန်းသိမ်းထား သ၍ ဘွဲ့မတိုင်မီအထိနှစ်စဉ် N200,000.00 တန်ဖိုးရှိပညာသင်ဆုကိုချီးမြှင့်သည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် MTN ဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆုကိုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် MTN ပညာသင်ဆုဖြင့်အတိတ်ကမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများအားကူညီပေးခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် MTN ဖောင်ဒေးရှင်းမှပညာသင်ဆုကိုကျောင်းသားများပိုမိုရရှိစေရန်အခြားသူများအတွက်၎င်းစာအုပ်ကိုလူအများအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်အတွက်ဈေးနှုန်းလျှော့ချခဲ့သည်။
Bonus: MTN ပညာသင်ဆုကိုကျွန်ုပ်တို့ထံ ၀ ယ်ယူပြီးလျှင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အောက် MTN ပညာသင်ဆုကိုသင်အခမဲ့အပြည့်အဝရယူနိုင်မည့်အတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများရရှိနိုင်ပါသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်သက်တမ်းမကုန်ခင် # 1000 တွင်ရယူရန်ယခုဤနေရာကိုနှိပ်ပါ -မကြာခင်မှာပဲသက်တမ်းကုန်တော့မယ်!
# 1500 မှာဝယ်ဖို့ငါ့ကိုငါ့ကို Whatsapp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
တိကျသော UTME သတင်းအချက်အလက်
သင်၏အဖွဲ့အစည်းအသေးစိတ် (တက္ကသိုလ်၊ တက္ကသိုလ်၊ ပညာရေးကောလိပ်)
သင့် WAEC အဆင့်
Next ကို Kin အသေးစိတ်
ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးသည် MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
MTN သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပညာသင်ဆုအတွက်လျှောက်ထားရန်၊ သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်နှင့်အဆင်သင့်ရှိစေရန်သေချာစေရန်သင်ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာကိုတစ်ဝက်အကြာတွင်ပြန်လည်စတင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
MTN Foundation စာမျက်နှာသို့ https://foundation.mtnonline.com/ တွင်ကြည့်ရှုပါ။
အောက်သို့ဆင်းပြီး MTN Science & Technology ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာကိုနှိပ်ပါ
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သင်လုပ်နိုင်သည် MTN STSS ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာစာရွက်ပေါ်တွင်ဤအရပ်၌နှိပ်ပါ။
မျက်မမြင်ကျောင်းသားများအတွက် MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်
WAEC အဆင့်များအပြင် MTN မျက်မမြင်ကျောင်းသားများ၏ပညာသင်ဆုသည် STSS ပညာသင်ဆုအဖြစ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သင်လုပ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင် MTN SSBS ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာစာရွက်ကိုကပ်ရန်နှိပ်ပါ။
MTN ပညာသင်ဆုကိုအောင်မြင်စွာလျှောက်ထားပြီးပါကပညာသင်ဆုအဖွဲ့သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများစွာကိုရွေးချယ်ပြီး MTN ပညာသင်ဆုကိုတတ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းသားများသည်ပညာသင်ဆုစာမေးပွဲအကြောင်းစာမေးပွဲရက်မတိုင်မီနှစ်ရက်အလိုအလျောက်အကြောင်းကြားပြီး၊ သင်သည်ဤအချိန်မတိုင်မီဤစာမေးပွဲအတွက်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသေးပါကသင်သည် MTN ပညာသင်ဆုရရှိရေးအတွက်သင်၏အခွင့်အလမ်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး၊ လာမည့်နှစ်တွင်အဆိုပါပညာသင်ဆု။
MTN ပညာသင်ဆုအတွက်အတိတ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများရရန်သင်သည် # 1000 ဆုကြေးငွေစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် (သို့) ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဖြင့် ၁၅၀၀ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူရန် Whatsapp တွင်ဆက်သွယ်ပါ။
အောက်တွင် MTN ပညာသင်ဆုမေးခွန်းအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်များ၏ _____ အရသာ။
Dr။ စတူးဝပ်သည်သူ၏အငြင်းပွားမှုကို ____ ပို၍ လိုအပ်သည်
စမ်းသပ်ဒေတာ; ခိုင်လုံသောအတိုင်းသူ၏စာတမ်း ___ သည်
A. ထောက်ခံမှု - လေးနက်တဲ့
B. ကျားကန် - လက်ခံနိုင်ဖွယ်
C. သန့်စင် - ကျေနပ်
D. buttress - မလုံလောက်
E. -succinct သတ်မှတ်
နိုင်ဂျီးရီးယားဖက်ဒရယ်အစိုးရ BEA ပညာသင်ဆုအားနိုင်ငံခြားမှလေ့လာခြင်း
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် NNPC-Chevron ဘွဲ့ကြိုပညာသင်ဆု | ဘယ်လိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အနိုင်ရ
နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားများအတွက် Agbami ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်
နိုင်ဂျီးရီးယားရှိထိပ်တန်း NGO ပညာသင်ဆု ၁၅ ခု
ဒေသခံပညာသင်ဆုများ နိုင်ဂျီးရီးယားပညာသင်ဆုများ ဘွဲ့လွန်ပညာသင်ဆုအောက်မှာ
MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရန်မည်သို့MTN ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာ
Previous post:တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်လျှောက်လွှာကြေးမပါသည့်ထိပ်တန်းကောလိပ် ၁၀ ခု ယခု Apply
Next Post:၅၁ သင်စဉ်းစားစေသည့်ကျမ်းစာမေးခွန်းများ
ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကဘာလဲ။
Z အက်ဆေး - ထုံးစံအက်ဆေးအရေးအသားဝန်ဆောင်မှု။
ကျနော်တို့ဇာတိနှင့်သာအလုပ်လုပ်ကြသည် အက်ဆေးစာရေးဆရာများ သင်အကောင်းဆုံးစာစီစာကုံးရရန်သေချာစေရန် ရယူခြင်း မင်းစာရွက်ပြီးသွားပြီ လွယ်တယ် ဘယ်လိုထွက်ရှာလဲ